5-ta sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Lietuva oo leh tayo sare
Posted on Waxaa laga yaabaa 10, 2022 Waxaa laga yaabaa 10, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 DHARKA CANADA
5 Dhoofinta Nord Sud-Jumlo iibiyayaasha Rags-ka ee Lietuva
6 Isku qas Wariyaasha Jumlada ee Lietuva
Lietuva, waxaa jira jumlo-iibayaal badan oo isku dhafan oo laga dooran karo. Si kastaba ha ahaatee, alaab-qeybiyeyaashan oo dhan ma wada siman yihiin. Boostada baloogga, waxaan ku muujin doonaa 5-ta sare ee jumlo iibiyaasha ee Tao Liwan oo ku saleysan tayada badeecada, tartanka qiimaha, iyo adeegga macaamiisha. Waxaan rajaynaynaa in macluumaadkani uu ku caawin doono marka aad samaynayso go'aannadaada wax iibsiga. Waad ku mahadsan tahay akhrinta!
Hissen waxay ku qalabaysan tahay shabakad saameyn leh, oo siinaya alaabta ceeriin oo leh in ka badan 70,000 oo dhibcood. Waxaana dhamaantood laga keenay magaalooyinka horumaray ee Shiinaha, oo ay ku jiraan Shanghai, Beijing, iyo Guangzhou.
Inta badan baayacmushtarrada waxay raadiyaan marada nadiifinta ee warshadaha ama ujeedooyinka ganacsiga, waxaana muhiim ah in la helo lammaane lagu kalsoonaan karo si uu u siiyo ilo iyaga, oo ay ku jiraan calal suuf ah oo masaxaya, calal denim, iyo calal isku dhafan.
Si loo hubiyo in alaabta Hissen ay qanciso baahida macaamiishooda, waxay haystaan ​​shabakad adag oo alaab-qeybiyeyaal ah iyo koox khubaro ah oo ku sugan goobta dib u warshadaynta ee gacan labaad.
Hissen waxaa ka go'an in uu macaamiisheeda u soo bandhigo alaab tayo sare leh oo qiimaheedu tartan yahay. Natiijadu waxay tahay u heellanaantooda ku qanacsanaanta macaamilka, Hissen waxay noqotay shirkad hormoodka ah ee la isticmaalo dharka jumlada.
VINTAGE CLOTHING waa ganacsi qoysku leeyahay oo ku takhasusay bixinta dharka la isticmaalay iyo calal nadiifinta warshadaha Jumladleyda adduunka oo dhan.
Shirkaddu waxa ay ka go’an tahay in ay sii jiri doonto oo ay ku hanweyn tahay in ay fududayn karto dib-u-isticmaalka maryaha haddii kale ku dambayn kara qashin-qubka. Dharka Vintage-ga ayaa si taxadar leh u soo qaada oo u habeeya maradiisa si dib loogu isticmaalo, iyada oo hubinaysa in alaabtoodu ay yihiin kuwa ugu tayada sarreeya.
Iyadoo in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah, VINTAGE CLOTHING waxay noqotay ciyaaryahan muhiim u ah jumlada dharka la isticmaalay.
Natiijo ahaan, shirkadu waxay dhistay saldhig macaamiil daacad ah oo qadarin tayada badeecadeeda iyo ballanqaadka joogtada ah.
Messina Hembry waa jumlo iibiye dharka gacan labaad ah, oo ku takhasusay dhoofinta dharka la isticmaalay ee ganacsiga caalamiga ah. Shirkaddu waxay leedahay koox-kala-soocid xirfad leh oo leh 20 shaqaale ah, waxayna soo saari karaan 500 oo tan oo dhar ah sannad kasta. Waxay bixiyaan calal suuf ah oo lagu tirtiro, maryo denim ah, iyo calal isku dhafan.
Messina Hembry waxay ku jirtay ganacsi in ka badan 10 sano, taasoo ka dhigaysa ilo la isku halayn karo oo lagu kalsoonaan karo oo ah dharka gacan labaad. Kooxdoodu waxay u heellan tahay inay kala soocaan dharka oo ay doortaan oo keliya alaabta tayada ugu fiican ee macaamiishooda.
Natiijo ahaan, macaamiishooda waxay ku kalsoonaan karaan inay helayaan dhar tayo sare leh oo la isticmaalay iyo qiimo dhaqaale, taasoo u sahlaysa ganacsatada inay helaan dharka la isticmaalay ee ay u baahan yihiin.
Davis iyo Moore waa alaab-qeybiye jumlo ah oo gacan labaad ah, oo la aasaasay 1981. Iyadoo in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah, Davis iyo Moore waxay ahaayeen magac qoto dheer oo duurka ku yaal.
Shirkaddu waxay leedahay noocyo kala duwan oo ah dharka gacan labaadka ah iyo dunta laga soo xusho, qiimahooduna waa macquul. Waxay sidoo kale ku leeyihiin sumcad wanaagsan inay noqdaan ilo la isku halayn karo masarrada warshadaha iyo maryaha.
Davis iyo Moore waa doorasho wanaagsan oo loogu talagalay ganacsiyada suuqa ee dharka la isticmaalay iyo dharka nadiifinta suufka. Khibraddooda ballaaran ee warshaduhu waxay dammaanad qaadaysaa badeecadaha iyo adeegyada tayada leh labadaba kuwaas oo buuxinaya baahida macaamiishooda.
Iskusoo wada duuboo, waxay bixiyaan qiimo aad u fiican oo lacag ah, taas oo ka dhigaysa doorasho caan ah oo ka mid ah jumladaha dharka ee la isticmaalo.
Dhoofinta Nord Sud-Jumlo iibiyayaasha Rags-ka ee Lietuva
Nord Sud Export waa shirkad dhar jumlo ah oo la isticmaalo oo fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta, waxaana la aasaasay 2003. Nord Sud Ilaha Dhoofinta waxay inta badan ka yimaadaan Yurub, kooxdooduna waxay soo saartaa in ka badan 40 tan oo dhar la isticmaalay maalintii. Shirkadu waxay u dhoofisaa dharka la isticmaalay aduunka oo dhan ilaa 25 wadan.
Dhoofinta Nord Sud waa il la isku halayn karo oo laga helo dharka la isticmaalay ee tafaariiqda iyo meheradaha raadinaya ikhtiyaarka jumlada gacanta labaad. Shirkaddu waxay leedahay xulasho badan oo ah dharka la isticmaalay, maryaha wax lagu masaxo, iyo maryaha warshadaha.
Isku soo wada duuboo, waxa ay ka dhigaysaa Dhoofinta Nord Sud mid aad u iibisa tafaariiqda dharka iyo meheradaha adduunka oo dhan.
Isku qas Wariyaasha Jumlada ee Lietuva
Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye la isku halleyn karo oo khibrad leh, Lietuva waa meesha aad tagi karto. Sannado khibrad u leh warshadaha, alaab-qeybiyeyaashani waxay leeyihiin waxa ay ku qaadanayso inay ku siiyaan alaab tayo sare leh oo daboolaysa baahiyahaaga iyo miisaaniyaddaada. Markaa haddii aad diyaar u tahay inaad la wadaagto alaab-qeybiye calal-sharaf ah oo sare, u soo dir su'aal maanta oo arag sida ay kuugu caawin karaan inaad ganacsigaaga u gudubto heerka xiga.
Views Views: 27
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta Sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Lietuva.